Esi agba ọsọ Linux na Azure, Nkebi nke II: Nkọwa - ITS Tech School
Esi agba ọsọ Linux na Azure, Nkebi nke II: Nkọwa ndị ọzọ
Nke a bụ nke abụọ nke usoro nhazi nke abụọ gbasara agba Linux na Azure. Na isi blog Nkebi nke m kwurula banyere nkwalite nke agba ọsọ Linux na Azure. Na nke a post m ga-agakwuo oke n'ime akụkụ nke echiche dị mkpa m chọtara mgbe m na-achọgharị ụzọ dị iche iche banyere Linux na Azure n'ime oge gara aga.
Were ihe ndị ọzọ
Linux na Azure: Up na Na-agba ọsọ
Linux na Azure: Nchebe, Nkwụsị na Nweta
A dị jụụ banyere banyere agba ọsọ Linux na Azure bụ ọhụụ na-agbụ Ngwa igwe kwadoro Linux n'ime ọnọdụ Azure. Nke a bụ ihe ọzọ na-ewute m nke ukwuu. Echere m na ihe Microsoft ga - ejikọta ya na Azure (ma ha) ma echere m na mix Linux agaghị adị mfe.
Nke ahụ mere ka ọ bụrụ ọnọdụ ahụ. E nwere mmelite Linux nke na-achikota kpọmkwem n'ime Azure. A na-anwale ịrị elu ndị a na ọtụtụ Linux distros. Ị nwere ike ịmalite, mechie ọnụ, ọbụnakwa nyochaa ihe ntanetị Linux site na Azure. A na-edekọ ihe dịka ederede akpa na mkpegbu Azure a pụkwara ịhụ ya n'ime Portal Azure.
Enwere uzo dị iche iche, dịka ọmụmaatụ, ntinye ederede nke na-enye ikikere ka edeba ihe n'ime ederede Linux.
Maka m, scalability bụ uru dị ukwuu nke kesara. Ọnụ ọgụgụ a na-akwụ ụgwọ mgbe achọrọ ma na-enye ndokwa maka oge mgbe a naghị achọrọ ya n'ezie bụ atụmatụ nke ntọala nke kọwapụtara. Ọ bụ ezie na igwe nwere ike ịmekota ya na ugbo ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ, na-ekesa nsụgharị maka ọtụtụ akụkụ na-emegharị usoro ahụ mgbe ọ na-egbu mkpa ọ dị ịnọgide na ngwaọrụ na mmemme iji mee ka ọ dịkwuo ike. Azure kwadoro igwe arụmọrụ nke na-emekarị elu ma ọ bụ ala na-ele ibu, na kalenda ma ọ bụ na-emeghị ihe ngosi. Enwere ikike a maka Windows na Linux arụmọrụ igwe dị ka ọnụ ọgụgụ nhazi. Usoro ntanetị nke Linux nwere ike ịdaba ma ọ bụ na n'ihi nhazi ọnụ ọgụgụ dị mkpa, dịka ọmụmaatụ, nhazi ma ọ bụ ibu nchekwa. The Linux Azure expansions akụkọ isi nkesa ozi si mebere igwe ọnụ ọgụgụ setịpụrụ Azure na site mgbe ahụ Azure autoscale ikike iwere akara. Nke ka ukwuu n'ime nke a bụ nnọọ ihe dị mfe maka ọrụ a na-arụ na igwe arụmọrụ. Ugboro ọzọ, akụkọ a bụ na a na-eme usoro ntọala Linux ma na-arụ ọrụ dịka nhazi usoro Windows.
N'ụzọ doro anya, Ngwa igwe kwadoro Linux nwere akụkụ ka ukwuu nke ihe nchedo nke ugbo. Oge gara aga Microsoft tinyela ma nọgide na-etinye ike na nche. Nke a abụghị ihe mgbaàmà ebere maka Microsoft. Ndị na-ebute igwe ojii chọrọ nchebe ka elu karịa onye ọ bụla ọzọ. N'elu ohere na enwere ihe ọmụma na onye na-ere ahịa mgbe ahụ, onye na-ere ahịa ahụ ga-eburu ihe ọkụ ma ọ ga-abụ na ọ ga-adị ndụ na ihe kpatara ya bụ na ozi abụghị ihe dị mkpa ha. N'elu ohere na enwere ihe omuma di na Azure, Azure bu onye nwuru anwu. Ọ bụrụ na ndị ahịa anaghị eche na ha nwere ego na Azure, ha agaghị eji Azure. Microsoft emeela ka o doo anya na ha achọghị Azure anwụọ.
E nwere ụzọ abụọ ị ga - esi nweta gander na nchekwa n'ime Azure: nchebe na engine na nche n'okpuru gị. Na ntinye uzuzu nke oru dika ndi otu ulo oru siri ike. Adịghị m onye nchekwa kama ọ bụ na mberede nchebe Azure dịka ọ dị m ezigbo mma.
Ọ bụrụ na enwere nchedo dị iche iche na-egosi na ịchọrọ na enwere ezigbo ọgbọ na Azure nwere ha, ma ọ bụ n'oge na-adịghị anya. Ị nwere ike ịnweta ọgụgụ isi nke nchebe nchekwa Azure na https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Compliance/default.aspx.
Nke a bụ naanị ọsọ ọsọ na-esere ya na akụkụ nke ugbu a azure nkwenye nkwenye.
N'agbanyeghi ihe nchebara anya nke anu aru na ihe nchebara anya n'ime azure onwe ya, i nwere ihe nchebe ole na ole nke nwere ike ijikorita oru Linux gi na Azure:
Hazie otu iche iche Nche. Hazie ìgwè iche iche Nche ma ọ bụ NSG na-aga dịka ọkụ ọkụ n'ime usoro ịmepụta azure. Ụkpụrụ NSG nwere ike ịkwụsị ijegharị na ọpụpụ site na isi iyi na ihe mgbaru ọsọ maka adreesị na ọdụ ụgbọ mmiri. NSG nwere ike jikọọ na ígwè ọrụ ma ọ bụ ihe odide niile.
Iwu ntụziaka. Ụkpụrụ nduzi na-enye gị ohere ịrụ ọrụ site na njedebe nke ọma na-elekwasị anya ma ọ bụ adreesị maka ìhè nke isi, ihe mgbaru ọsọ na ọdụ ụgbọ mmiri. Na ohere na ị nwere ntinye ọkụ ma ọ bụ nyochaa igwe gị, ị nwere ike n'enweghi ngwugwu nke ndokwa nke igwe na imepụta na-eduzi ụkpụrụ iji mee ka ngwaọrụ ahụ gafere.
Mepee Adreesị IP. Gwa igwe di iche iche na-agba agba n'ime usoro. Dị ka ihe doro anya, usoro ndị a enweghị ike ịnweta weebụ. A na-achọta adreesị IP oghere maka ohere ọ bụla weebụ ga-enweta na igwe arụmọrụ.
Scrambled ike ike draịva. Enwere ike ịgbanye ngwa ngwa na Azure na-enye ihe ọmụma ka ị nweta mkpuchi. Ndenye nkesa siri ike nke Linux na-eji DM-Crypt pụta ma nweta ihe maka efere siri ike (VHDs) mere na Azure ma ọ bụ VHD nke nọ n'oge ahụ gbanwere ma kpalie Azure.
n'ihi na Devops n'ime ụlọ, robotization na repeatability dị oké mkpa. Ọfụma maka Microsoft, enwere ọganihu nke ikike na-enye ma. Azure nwere nkwado mpaghara maka Chef na Puppet. Azure ya onwe ya nwere usoro nke robotization nke ya na nkwado PowerShell na-arụ ọrụ. Usoro mmepụta na-abanye na Ngwa igwe kwadoro Linux site na edemede infusion na fancied steeti setup. Debe ya na usoro usoro nkọwa nke JSON maka ịmepụta Azure ọ bụla na API dabeere na REST maka ikike Azure ọ bụla na enwere akụkọ siri ike maka robotization na DevOps.
Na ohere na ị na-achọsiwanye ike imekwuwanye maka ọrụ Linux na-arụ ọrụ na Azure, Ihe Ọmụma nke Ụwa achikotala obere oge, ihe omimi nke uche na-elekwasị anya na-agba Linux na Azure. Usoro ihe a na-adabere na ihe isi ike kama ịme ka ị banye site na nkwụsị ụkwụ na-arụ ọrụ. Ihe ọmụmụ ahụ na-enye gị nnukwu ebumnuche na ọrụ na-enye gị ohere iji anya gị hụ ndokwa gị. Ihe isi ike na-enye gị enyemaka dị ike dị ka achọrọ, site na nkọwa nhazi maka ngosi na ntinye ntinye ntinye maka ọrụ ọ bụla i nwere ike ịchọ enyemaka karịa. Ị nweta ohere ịhọrọ ọtụtụ enyemaka ị chọrọ, mgbe ị gwụchara ule, ị na-edozi ya maka nyocha site n'aka onye isi okwu.